DAAWO: RW Kheyre oo u tagaya ciidamadii Roobow, lana kulmaya
XUDUR(P-TIMES) – Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre ayaa maanta booqasho ku tagaya magaalada Xudur ee xarunta gobalka Bakool, isagoo ay wehlin doonaan madaxda Koonfur Galbeed, waxayna kulamo kala duwan la yeelan doonan waxgaradka gobalka Bakool oo ay kala hadlayaan arrimaha ku wajahan dibu dhiska Soomaaliya.
Koonfur Galbeed wasiiro kasocda ayaa maalin sii horeysay gaaray magaalada Xudur, si ay u diyaariyaan soo dhaweynta wafdiga Raysalwasaaraha Soomaaliya, waxaana sidaas oo kale madasha jooga qaar kamid ah odayaasha dhaqanka.
Waxgaradka iyo Wafdigu waxay ka wada hadli doonaan sidii go’odoonka looga dulqaadi lahaa magaalada Xudur iyo deegaanada kale ee gobalka Bakool, sidaas oo kale caqabadaha ay ka hadli doonaan waxaa kamid ah in wali aan la fulin balan-qaadyadii Madaxweynaha Soomaaliya.
Raysalwasaaruhu wuxuu kulamo la yeelan doonaa Saraakiisha ciidamada ee kusugan Xudur oo ay ku jiraan kuwii gaarka u lahaa Mukhtaar Roonow Abu Mansuur oo ku jira gacanta dawladda Faderaalka Soomaaliya.
Sharuudo adag ayay saraakiisha ciidamada Roobow hordhigeen wasiiro iyo shaqsiyad kasocda dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, waxayna u sheegeen in ay waajib tahay in la fuliyo balan-qaadkii dhexmaray Madaxweyne Farmaajo iyo Odayaasha dhaqanka oo ay ku jiraan arrimaha Ammaanka ee dalka iyo in lasii daayo Roobow.
Shalay ayay ahayd markii ay dawladda Soomaaliya balan-qaaday in ay mag dhaw ka bixin doonto cid kasta oo ku dhimatay dhacdooyinkii ka dhacay magaalada Baydhabo bishii December ee sannadkii hore, xiligaas oo ay dhaceen doorasho Madaxweyne-nimo oo la doortay Laftagaren lana xiray Mukhtaar Roobow oo la tartamayay.